Kulula & Ubutofotofo Kufuphi Nekampasi Nasedolophini - I-Airbnb
Kulula & Ubutofotofo Kufuphi Nekampasi Nasedolophini
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguJeff & Penny
UJeff & Penny yi-Superhost
Eli ligumbi leendwendwe #2 kumagumbi eendwendwe ayi-2 ekhayeni lethu. Zise kwicala ngalinye legumbi lokuhlambela leendwendwe elisetyenziswa nangabanye abantu elineshawa, isinki nendlu yangasese. Iindwendwe ziyakwazi ukufikelela kwigumbi lasekhitshini nelokuhlamba impahla.
Sineendawo ezifikeleleka kakhulu kuzo zonke iindawo zaseAmes. Ikhaya lethu luhambo lwemizuzu eyi-15 ukuya kweyi-20 okanye imizuzu eyi-5 ngemoto ukuya eDowntown Ames okanye kwiYunivesithi yaseIowa State. Indawo yokumisa ibhasi ekuthiwa yi-CyRide ikufutshane kakhulu nomnyango wethu wangaphambili. Iindlela zokuhamba/zebhayisekile ukuya kwiipaki ezininzi ezikufutshane.
Indawo yethu ime lula kuzo zonke iindawo zaseAmes, kunye neHwy 30 ne-I35. Sihlala apha, kwaye siyakuvumela ukuba wabelane ngobuhle kunye nendawo yekhaya lethu. Sibhetyebhetye kakhulu kuzo zonke iinkalo zokungena/zokuphuma; sinceda abantu abaninzi abasezidolophini ngomsebenzi, kwiiklasi ezandisiweyo e-ISU, ukutyelela abahlobo, ukuya kwimicimbi yezemidlalo nezolonwabo, njl njl. Sinolwazi ngoAmes kunye nommandla ojikelezileyo. Uza kuba noxolo nokuzola kunye nendawo yokonwabela ixesha lakho apha.
Eli gumbi linebhedi enye epheleleyo, idesika, indawo yokuma ebusuku, isibane, ikhabhathi epheleleyo kunye neefestile ezimbini. Umnyango wegumbi lokulala unekhowudi yedijithali yokukhusela izinto zakho eziyimfihlo. Igumbi lokuhlambela likwindawo esecaleni eneshawa, isinki nendlu yangasese.
Iindawo ezikufutshane ezithe cwaka, ikhaya elivulekileyo, igumbi lakho lokulala. Kulula ukuya naphi na e-Ames. Ngemoto, ngebhayisekile, okanye ngeenyawo uza kukwazi ukuya kwiindawo ezintle ezinemithi kunye neendlela eziya kwiindawo ezinamahlathi ecaleni kwemifudlana. Ivakala imangalisa, akunjalo? Yi!
Umbuki zindwendwe ngu- Jeff & Penny
Indawo yakho ihlonitshwa apha. Siyakuvuyela ukwabelana ngentsapho yethu kunye nekhaya lethu xa ubuza. Sichazele ukuba singenza njani ukuze ukuhlala kwakho kube mnandi.